Banyere Banking Banking: Gịnị mere ndị nkịtị ji emepụta ihe ndekọ akụ na ala
Banyere Banking na Banyere Akụrụngwa
Ọ dị mma icheta ụwa dịka ebe mara mma ebe ị nwere ike ịgaghị enwe nsogbu nsogbu ọ bụla. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịmụba ọnụ ọgụgụ ndị ahụ, ị ​​ga-achọpụta na ohere dị mma na oge ụfọdụ ị ga-eji akwụkwọ ikpe gaa n'aka gị. Karịa otu. Dabere na onye ọka iwu Jay Mitten, onye nkezi na US na-enwe akwụkwọ ikpe asaa n'oge ndụ ya. Site na ya, onye ọka iwu na-enweghị atụ na-agbakwunye mmanụ ọkụ na ịgbanye ọkụ nke nsogbu gị.
Nke a yikarịrị ka ọ bụrụ maka ndị na-eme mgbe niile nwere ụlọ ọrụ nke aka ha. N'ihi nke a, enwere ike itinye gị n'ụlọ ikpe oge ọbụla - ikekwe ọnwụnwa iji nwetacha akụ gị - n'ọnụ ụzọ gị n'oge ọ bụla. Otu ihe doro anya nye ọtụtụ ndị. Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na akwụkwọ ikpe sitere na azụmahịa ma ọ bụ okwu nke onwe. O nwere ike ịbụ ịgba alụkwaghịm, ma ọ bụ nwee ụtụ isi. Mgbe ọ bụla ị garuru n’ụlọ ikpe, ịchọrọ ka akụ gị, ma ọ bụ opeka mpe n’ime ha, ka echekwa gị. N'ihi ya, ọtụtụ na-echigharịkwuru mbupụ ala tinyere ngwa iwu kwesịrị ekwesị iji chekwaa akụ ha site n'ihe ọjọ ndị dị njọ na ndụ.
Kedu ihe mere Banking Bank?
Yabụ, gịnị kpatara ndị mmadụ ji emeghe akaụntụ akụ na-akụkarị ihe? United States naanị nwere 4.2% nke ndị bi n'ụwa. Agbanyeghị, o nwere 80% nke ndị ọka iwu ụwa na 96% nke akwụkwọ ikpe ụwa. Yabụ, nchebe ego bụ aha egwuregwu akpọrọ ndị America ebe ọ bụ na nke a bụ ihe kacha akpatara ndị mmadụ nsogbu ego. Imirikiti ndị mmadụ na-akwaga isi obodo na mba ahụ na-elekwasị anya na echiche nke ichedo oke ọnụ ahịa. Ọzọkwa, ha na-eche na ọ dị mkpa iji chebe uru ha nwere ike ịchebe ọdịnihu ha — ndị e ji ụgwọ, ndị ịgba akwụkwọ, na ịgba alụkwaghịm. Imirikiti ọgụ iwu sitere na US.
Ha na-ejikwa akaụntụ ndị dị n’akụkụ mmiri iji belata ụtụ isi ha. Nke a bụ ego buru ibu na-esite na mba ndị ọzọ. US na-atụ ndị mmadụ ụtụ isi n ’ụwa niile. Agbanyeghị, ụlọ ọrụ dị ka Apple na Google na-echekwa ego nke oke mmiri ma nwee ọ enjoyụ oke ịtụ ụtụ. N'adịghị ka US, ụfọdụ mba anaghị atụ ụtụ isi maka ego ha na-enweta n'ụwa niile. Onye ọ bụla enweghị ike iji nke a, ma, buru ụzọ chọọ ndụmọdụ ụtụ isi enyere ikike. Ọzọ, adikwala ya ike chepụta ihe "ọ ga-abụ otu a" atụmatụ ụtụ isi n'uche gị. Nweta ndụmọdụ ụtụ isi enyere ikikere.
Maka ndị na-ekere òkè na nchedo akụ, ha na-etinyekarị akụ ndị a n'otu n'ime ọtụtụ obere steeti ndị nweere onwe ha. Mpaghara ndị a na-ahụ ahịa nke ndị bịara abịa si mba ọzọ nwere mmasị dị njikere maka ọrụ ndị ọrụ bank. Ọtụtụ n'ime mba ndị a nwere iwu na -epụpụ akụ ahụ na ikpe. Na mgbakwunye, ụfọdụ mpaghara nwere ike inye ezigbo nzuzo maka ndị na-etinye ego na akaụntụ ndị a. Dị ka o kwesịrị ịdị, iwu nyere mmadụ iwu ịgbaso iwu obodo ya.
Oge ụfọdụ, inye onyinye bara ọtụtụ n'ụdị. Ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ nhọrọ oke osimiri dị n'okirikiri, ụgbọ ndị dị n'ụsọ na-adịkarị ala karịa maka ebumnuche nke nchebe bara uru. Dị ka ihe atụ, ntụkwasị obi n'ụsọ na-enye ike kachasị mma na nchekwa nchekwa. Chetakwa, ọ bụrụ na obi gị na-ekpe gị ikpe na iwere ụzọ a, emela ya. E kwuwerị, ọ bụ akụ gị ka anyị na-ekwu maka ya — ndị ị gbasiri mbọ ike inweta.
Mara na isi ya, nchekwa ngwa ahịa abụghị ihe karịrị nchịkwa ihe egwu. Ọ dị ka ịzụta amụma mkpuchi; na-echekarị nche ma dị ọnụ ala. Ọ bụrụ n’ị na-azụ ahịa taa, mgbe ahụ ịghọta ihe siri ike ị nweta uru. N'ihi ya, ịkwado ụlọ nke na-echebe mkpụrụ nke ọrụ gị ma chekwaa gị ego nwere ike ịbụ ụzọ amamihe dị na ya.
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ karịrị otu azụmahịa, ịchọghị nkwupụta nke na-esite n'otu azụmaahịa bibie ndị ọzọ. Maka nke a, ị nwere ike chọọ iche maka otu ọrụ maka azụmahịa ọ bụla. Usoro a na-etinye azụmaahịa ọ bụla na oghere nke ya. N'ụzọ dị otu a, ịgba akwụkwọ megide otu ụlọ ọrụ agaghị emebi alaeze gị niile. Na mgbakwunye, ị na-ebuli ike nke atụmatụ nchekwa atụmatụ gị mgbe ị na-eme ya esenidụt. Yabụ, kedu ihe nhọrọ gị maka ichebe oke osimiri?
Nevis na Nchedo Akpa
Nevis bụ otu n'ime ọdụ ụgbọ mmiri mbụ dị na oge a iji nye nchekwa nchekwa na ụkpụrụ nzuzo. O bu otu uzo iji nwaa ma dozie nsogbu nke ime otutu otutu ahia. Companieslọ ọrụ dị na Nevis nwekwara ike igbochi mwakpo aghụghọ nke nwere ike ịbịakwute ndị ọka iwu enweghị atụ. Iji ọrụ ntọala ụlọ ọrụ, dịka nke a, ị nwere ike ịtọlite ​​azụmaahịa dị n'ụsọ. Jikọta ya na ntụkwasị obi dị n'okirikiri yana / ma ọ bụ ntọala nke sitere na ikike dị iche iche n'ụwa niile nwere ike inye aka belata mmachi.
Ndị ọkachamara na-atụkarị aro maka azụmaahịa nke Nevis n'ihi na iwu ha kwadoro nzuzo na nchedo akụ. Nevis LLC, ka edere akwụkwọ a, na-enye ụkpụrụ nchebe kachasị dị mkpa nke ụlọ ọrụ ọ bụla dị n'èzí.
Gịnị kpatara Nevis?
Ndị a bụ ụfọdụ ihe kpatara nke Nevis LLC (ọkachasị mgbe ejikọtara ya na ntụkwasị obi Nevis) bụ ezigbo ngwaọrụ nchekwa ngwa ahịa:
Mmadu kwesiri itinye ego $ 100,000 tupu ime akwukwo nke ikpe iji choo ikpe megide mmasị onye otu ya na Nevis LLC.
Ntugharị wayo ahụ ụkpụrụ nke ihe mgbochi bụ afọ abụọ. Nke ahụ pụtara na mgbe ị tinyere akụ na Nevis LLC, afọ abụọ ka nke ahụ gasịrị, ụlọ ikpe agaghị ahụ ikpe ahụ Nevis.
N'elu nke a, onye kwụrụ ụgwọ kwesịrị igosipụta ihe doro anya karịa onye nwe Nevis LLC kwụrụ ụgwọ LLC iji chekwaa akụ ndị ahụ n'aka onye na-agbazinye ego ahụ.
Nchedo aku na - eme ka onye okachara ghara ijide ihe enyere ụlọ ọrụ ma ọ bụ akụ ya ọ nwere nye onye otu na mgbakwunye na ọtụtụ ndị otu LLC.
Ọ bụrụgodi na mmadụ enweta ikike nkwụghachi ụgwọ, ọ na-agwụ n'afọ atọ onye na-agbazinye ya ego agaghị eme ya.
Ọbụna ike karịa Nevis LLC bụ nchebe nchebe nke Nevis. Itinye ya n'okwu siri ike, Nevis tụkwasịrị obi bụ otu n’ime ihe ndị kacha dị mkpa maka nchekwa ngwa ahịa dị n’ụwa. Mgbe ụlọ ikpe US kwuru na "tụgharịa ego ahụ" onye na-ahụ maka ịre ahịa nọ n'oké osimiri na-ekwu, "nwute, ị nweghị ikike ebe a." Mgbe anyị hibere ntụkwasị obi Nevis anyị tinye Nevis LLC n'ime N'ụzọ ahụ, onye ahịa bụ onye njikwa LLC mgbe oge adịghị mma. Mgbe etigidere ya na nsogbu iwu, onye ntinye aka (ulo oru iwu anyi na Nevis) nwere ike banye ma mee ka ikike nchedo ihe bara uru.
Belize na Nchedo Akpa
Belize na-enye akụrụngwa na ụlọ ọrụ dị n'akụkụ mmiri. Mgbe Nevis gasịrị, ọ bụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma maka nchebe nchekwa na nzuzo. Dennis Lormel, onye bụbu onye isi ngalaba Ngalaba Ego FBI kwuru, sị, "Belize bụ otu n'ime obodo m ga-aga zoo ego m ma bie ndụ. "Nke bụ eziokwu bụ na a ga-echebe m ebe ahụ, enwere ike gọọmentị (US) agaghị enwe ike ịdọrọ m ma ọ bụ banye na akaụntụ akụ m." Dị ka o kwesịrị ịdị, a na-atụ aro ka ị jiri akụ na-akụghị anya na mmiri. maka otu n’ime ọtụtụ ebumnuche iwu kwadoro.
Emesia Nevis, gi Belize LDC tinyere ya Tụkwasịnụ ntụkwasị obi bụ ụzọ abụọ kachasị dị mkpa eji echebe nchekwa bara ụba n'ụwa niile. Nke a bụ ihe kpatara ya.
N'ihi gịnị Ka Beli?
Onyinye isi ego (ego enyere aka iji guzobe LDC) bụ nke apụrụghị na mbinye ego na-enyefe ego n'aka onye binyeere ya.
Iwu nke oke na-ezuru wayo maka Belize LDC dị mkpụmkpụ. Ọ bụ naanị otu afọ site na njikwa ego ntọala ya na ego ma ọ bụ naanị afọ abụọ site na mgbe ebugharịrị ahịa ahụ.
Ntụkwasị obi na Belize nwere uru dị otu a ma sie ike karịa LDC. Mgbe mgbe, anyị guzobere ntụkwasị obi okwukwe na Belize LDC n'ime. Dị ka ọ dị na Nevis LLC, onye ahịa bụ onye njikwa Belize LDC ruo mgbe “ihe ọjọọ” ahụ mere. Mgbe onye mgbazinye ego wakporo ya, Belize na-ebute ụzọ ma chekwaa akụ. Courtslọ ikpe mpaghara gị enweghị ikike ịbanye na bekee. Yabụ, ha enweghị ike ịmanye onye nnọchi anya ya irube isi.
Iwu nke oke na inyefe aghụghọ na ntụkwasị obi Belize dị mkpụmkpụ dịka enwere ike. Maka ịgba alụkwaghịm na-enweta ma ọ bụ ketara eketa na-ekwu na iwu nke oke bụ ihe efu. Nke ahụ bụ, ozugbo mmadụ gbanwere ụdị akụ ahụ na ntụkwasị obi, ntụkwasị obi na-echebe ha.
Ịchebe Akụrụngwa gị
Ikwusi ihe ị na-ekwu sitere na iwu ọka iwu enweghị atụ, ị ga-elele ihe ọghọm gị na uru na ụdị akụ gị dị. Planningchụ ego na-eme ihe ngosi na-enye oke nhọrọ dị iche iche nke anaghị adị n'ụlọ. Iji bido, tupu ịmalite atụmatụ ọ bụla dị elu iji chebe akụ nke onwe gị, lee ihe ị ga-eme. Nke mbu, ị ghaghi igba mbọ hụ na ị nwere ezigbo nchekwa ntọala bara uru.
N'ụzọ bụ isi, ị ga-etinyerịrị akụ ahụ n'ime akụrụngwa ndị iwu kwadoro. Ọzọkwa, ị ga-ahọrọ ikike kwesịrị ekwesị iji wee nweta nchebe ịchọrọ. You nwere ike ịkọwapụta akụnụba gị n'ime akụrụngwu iwu ndị a na ụlọ akụ dị na mpaghara na-anaghị anabata ikpe mba ọzọ. Ọ bụ ihe kwụ ọtọ ma dịkwa ọsọsọ igosi. Na mgbakwunye, site n'ime nke a, ị nwere ike ichekwa akụ na njirimara gị mgbe ị na-azụ ahịa mba ụwa. Mee ka anyi mara na ndia bu ochicho gi, anyi gha egosi gi otu a.
The Cook Islands tụkwasịrị obi or Nevis tụkwasịrị obi jikọtara ya na LLC dị na mpụga n'ime ntụkwasị obi bụ ezigbo ngwakọta. Dịka ekwuputere n’elu, mgbe ụlọ ikpe ndị dị na United States chọrọ ka iweghachi ego ahụ, ụlọ ọrụ anyị na-ahụ maka oke mmiri nwere ike jụ irube isi.
Ụlọ Ahịa maka Nchedo Ego
N'ụzọ na-adọrọ mmasị, akwụkwọ akụkọ Tribune-Review kwuru na ihe dị ka pasent 50 nke azụmahịa nile nke ụwa na-eme njem site na ụlọ ahịa ụtụ isi. Otu ugwo ugwo ugwo banyere ego n'ulo oba di iche iche na-enweta akuko ulo oru onwe gi n'aha ulo oru. Ya mere, ọ na-echebe ego site n'aka onye ọ bụla ịchọrọ ịhapụ ego. Nke a nwere ike ịgụnye ndị nwere ụgwọ, ndị ọka iwu, ndị di na nwunye mbụ, ma ọ bụ ndị ọzọ ego.
“Inwe ụlọ ọrụ na-amaghị aha dị mma maka ọrụ niile… na ịnweta ụlọ ọrụ na-amaghị aha dị mfe,” ka Jason Sharman, onye ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ na-akụghị anya na Mahadum Griffith na Australia kwuru. Ime ụlọ ọrụ nwere ike ịdị ngwa ma dịkwa mfe. N'ezie, nke a bụ ọpụrụiche anyị ma n'oge ọrụ ọrụ, ụlọ ọrụ anyị na-eme ka ụlọ ọrụ dị iche iche na-anọ kwa ụbọchị. Accountnweta nnabata ụlọ akụ dị na mpụga ụlọ ọrụ gị nwere ike ịnwekwu oge na mbọ. Ya mere nweta enyemaka n’aka onye nwere ahụmịhe na ụlọ ọrụ. Ọzọkwa, nke a bụ ihe anyị na-eme kwa ụbọchị - na-enyere ndị ahịa aka imepe akaụntụ ndị dị n'akụkụ oke. Mgbe i mere otu ihe ahụ, ị ​​ga-achọpụta na ọ bara uru nke ukwuu ma ọ bụrụ na echebe onwe gị pụọ na mwakpo ego.
Accountsfọdụ ụlọ akụ na-akụkarị mba ọzọ chọrọ naanị puku dọla abụọ maka nkwụnye ego ha. Ndị ọzọ, ọkachasị ụlọ akụ Switzerland, chọrọ ego buru ibu iji kwado. Banyere ego na Switzerland na-achọkarị site na $ 250,000 gaa $ 1 nde iji mepee akaụntụ ahụ.
Azụmahịa na-atụkwasị maka Nchebe Akụrụngwa
Atụmatụ nchebe ịpụga oke osimiri abụrụla isi okwu nke arụmụka n'oge ole na ole gara aga. Ihe kachasị mma atụmatụ nchebe bụ ime ntụkwasị obi a na-apụghị ịgbagha agbagha nke nwere ikike ịhọpụta pụrụ iche. Nke a bụ n'ihi na iwu anaghị atụle ntụkwasị obi akụ dị ka ihe onwunwe nke Settlor. Buru n’uche, mgbe ịzụrụ ntụkwasị obi, ị bụghị ịzụta ntụkwasị obi. Na mgbakwunye, you na-azụta ahụmịhe nke onye na-ede ntụkwasị obi ahụ.
Iji kpuchido gị, onye ọkachamara ga-enyocha ya nke ọma dabere na ụkpụrụ ma ọ bụ ahụmịhe nke iwu. Yabụ, nke a abụghị ime ya onwe gị. Nweta enyemaka. E kwuwerị, nke a bụ ego gị. E nwere ọtụtụ ụdị ntụkwasị obi. Dị nke ọ bụla nwere ebumnuche dị iche ma ọ bụ ihe mgbaru ọsọ.
Inweta ntụkwasị obi dị n'okirikiri nwere ike ịbụ nhọrọ kacha mma maka ichebe akụ gị. N’ezie, anyị achọtala ihe dị n’elu nri tụkwasịrị obi na ngwaọrụ kachasị ike dị.
Ndị mmadụ na-eji ntụkwasị obi ndị dị n'èzí agafe karịa karịa izere onye na-ahụ maka ụgwọ. Dịka ọmụmaatụ, ha na-eme ya maka onye na-achọ ịpụnara akụnụba ya n'ihe gbasara ụgwọ ụgwọ ndị ọrụ. Anyị nwekwara ike iji ha iji chekwaa akụ gị n’aka ndị ọka iwu na-adịghị mma ga-agba ụgwọ maka ịkwatu ụgbọ ala, ọkụ na-emebi ọtụtụ ihe karịa mkpuchi mkpuchi gị, wdg.
Dịka ọ dị na usoro nchedo ngwa ahịa ndị ọzọ, ọ kacha mma itinye ntụkwasị obi n'ọrụ ka ọrụ gbaa mbọ. N'ụzọ ahụ, ọ nwere ike ichebe gị nke ọma. Ee, inwere ike iji ya dịka ulo-agha mgbe ebighi ebi. Mana ime nkwadebe buru ezigbo ibu. A tụkwasịrị ntụkwasị obi nke dị n'okirikiri, maka ebumnuche a, dị ka ntụkwasị obi nchebe. Nke ahụ bụ, njedebe nzube bụ ichekwa akụ gị.
Ihe na-agaghị eme
Ọ bụ ezie na ntụkwasị obi n'ụsọ nwere ike inye ohere ịchebe onyinye bara ụba, ị ga-agakwuru nhọrọ a. Ikwesiri igba mbọ hụ na onye na-eweta gị nwere ahụmịhe ma kọọ ntụkwasị obi ahụ nke ọma. Na mgbakwunye, nzukọ nke nwere mmekọrịta ogologo oge na onye na-ahụ maka ọrụ kwesịrị iduzi ihe okike ya.
Ringnyefe akụ na USA ka ọ bụrụ ntụkwasị obi zuru ụwa ọnụ iji gbochie onye nwere ụgwọ ịnwe ịnakọta nwere ike ịbụ ntinye ugha. Agbanyeghị, nke a bụ naanị okwu gbasara obodo nke na-enweghị nsonaazụ mpụ ọ bụla. Okwu dị mma maka nkebi ahịrịokwu a bụ 'azụmahịa anaghị akwụ ọtọ.' Nke a bụ n'ihi okwu wayo na-eduga ndị na-amaghị banyere echiche nke dị njọ karịa ka ọ dị n'ezie.
Iwu ụtụ isi nke ụlọ akụ na mbupụ
N'ụzọ bụ isi, enwere otu njide azụ na ụdị ndekọ ego ndị dị n'akụkụ mmiri. Nke ahụ bụ ijide n'aka ịgbaso iwu "ogige ụtụ" United States. Iwu ndị a gụnyere ijide n'aka na ịme ihe dịka:
Na-ekwupụta ihe ọ bụla nnyefe ego na-enyefe na ntụkwasị obi mba ọzọ na IRS.
Enwere ike ịtụ ụtụ site na ntụkwasị obi dịpụrụ adịpụ nke onye America natara na onye ahụ.
A na-atụ ụtụ ego niile ekesara na-akwụghị ụgwọ dịka ego ha na-enweta.
Ndenye aha maka ego ị nwetagoro na ntụkwasị obi dị n'okirikiri nke enwere ike ịmalite site na tupu afọ aga. Ma ọ bụghị ya, nkesa nwere ike ime ka onye America kwụọ ụtụ isi ego afọ ndị ahụ. Nke a bụ ihe a ga - asị na ọ bụ ego ọ kpatara na afọ ndị gara aga. Ọ bụrụ na egoghị ego o kwutere na mbụ, enwere ike ịchọrọ ka ịkwụ ma ntaramahụhụ na ọmụrụ nwa. Isi ihe dị na ya bụ na ego ị na-enweta n’obodo na-anọpụ iche na ụtụ isi. Gaghị akwụ ụtụ ma ọ bụ obere karịa na ụtụ isi ma ọ bụrụ na ijide ego gị n'agu ma ọ bụ na ihu mmiri.
Ndị IRS ga-agwa gị (ma ọ bụ CPA gị) imepụta otu ụtụ isi dị mfe. Mpempe akwụkwọ ahụ na-akọwapụta uru nke akụ dị n'ime ntụkwasị obi. Na mgbakwunye, ị ga - akpọ aha ndị ga - erite uru na ntụkwasị obi ahụ. Ọ bụrụ na ịjide akụkọ a, ịnwere ike irite ezigbo ego, tinyere ihe ndị ọzọ, ụgwọ mbubreyo $ 10,000. Ọ bụrụ na ịjighi mkpesa mkpesa kpamkpam, ọ nwere ike nwetakwu ihe ọ bụla. Yabụ, jide n'aka na ị ga-edekọ akaụntụ gị zuru ezu ma debe fọm ndị dị mfe n'oge.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, IRS achọghị ịma ma ọ bụrụ na ịnwe akaụntụ nnabata. Inwe akaụntụ dị n’akụkụ mmiri adịghị ebuli “ọkọlọtọ ọbara ọbara,” dị ka ụfọdụ kwenyere n’ụzọ na-ezighị ezi. Ha na-ahụ naanị na ị na-akọ ego gị. Ma ì rite uru n’azụ ma ọ bụ n’ọdọ mmiri, kọọ ihe ị kpatara. Yabụ, ọ bụghị n'ụsọ ma ọ bụ n'ụsọ mmiri dị mkpa na ihe IRS. Ọ na-akọ akụkọ ego gị nwetara, nke dị mkpa, agbanyeghị ebe ego ndị ahụ kpatara.
Sho na-atụzi atụmatụ ịnara ahịa na ntụkwasị obi na ụtụ
Enwere ụfọdụ ndụmọdụ ụtụ isi dị mkpa ị kwesịrị ịmara banyere onye inyeaka, transferor, ma ọ bụ onye na-emezu ihe ala ọzọ. Ihe ndị ahụ na-emegharị akụ na ntụkwasị obi si mba ọzọ yana ndị na-erite uru nke ndị US tụkwasịrị obi kwesịrị ịma ozi ndị a. N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na ị na-ejide akụ nke mba ọzọ gị dịka nke ụlọ ọrụ mba ofesi, enwere ihe ndị ọzọ ị kwesịrị ịma. Kpọsị, mee ihe kwesịrị ekwesị ma ọ bụrụ na ị daba na nke ọ bụla n'okpuru:
Are bụ onye ejiri ya nwe 10% ma ọ bụ karịa nke ụlọ ọrụ na-ahụkarị. Ọzọkwa, ihe karịrị ọkara ngwaahịa ụlọ ọrụ nwere ndị nwe ala America ma ọ bụ karịa.
Ndị America ise ma ọ bụ karịa ka etinye aka na ngwaahịa ụlọ ọrụ gị. Na mgbakwunye, 60% na karịa ego ahụ ụlọ ọrụ ahụ sitere na itinye ego.
I nwere ikike ibute ihe ụlọ ọrụ mbupụ na-ejide 50% ma ọ bụ karịa nke akụ dịka akụ akụ. Na mgbakwunye, ị na-eme 75% na karịa nke nnukwu ego na ego idide yiri ya.
Ihe ọ bụla dị n'elu bụ eziokwu? Ọ bụrụ otu a, ịkwesịrị ijide na ị ga-ekpesa ego na nloghachi ụtụ nke onwe gị. Yabụ, jide n'aka na ị gakwuru onye CPA bụ onye nwere ahụmịhe ya na ndị ọrụ ụwa niile. Imirikiti ndị CPA nwere mmụta na mpaghara a sitere na obodo ndị buru ibu nke nwere ọnụ ọgụgụ bara ụba ndị mmadụ. Udo agbata obi gị nke CPA sitere na Bugtussle, Kentucky nwere ike nọrọ ya n'isi. Still ka nwere ike iji ogbe gị ma ọ bụ gal mee maka nzacha gị. Mana maka filings ndị dị n'akụkụ, nweta onye maara ókèala ahụ.
N'ụzọ doro anya, ịkwesịrị ịtọlite ​​ntụkwasị obi nke ị ga - eji na - echekwa ihe ndị dịpụrụ adịpụ na anya gị imeghe O n’enye gi uzo idobe ihe gi aka karie ka nke ndi nbinye ego. Yabụ, site na iji atụmatụ dị mma, na ịmara banyere ịtụle ụtụ n’otu n’otu, ị ga - eme ihe dị mma. Na mgbakwunye, ị nwere ike zoo akụ gị n’aka ndị ọka iwu enweghị atụ. Ka obi sie gị ike, enwere ụzọ dị irè ma sie ike iji chebe onwe gị pụọ n'ihe egwu. Otutu ndi mmadu ndi ozo na-eme kwa ubochi.
<Isi nke 5
Isi nke 7>